Soo saareyaasha xaashiyaha loo yaqaan 'acrylic sheet' soo saareyaasha & alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha ayaa laga soo saaray xaashida looxa loo yaqaan 'acrylic sheet'
Guddiga looxa ee hufan ee loo yaqaan 'acrylic' wuxuu adeegsadaa PMMA caag ah oo tayo sare leh oo ka mid ah shirkadaha caanka ah ee gudaha iyo dibaddaba sida alaabta ceyriinka ah waxayna qaadataa habka isdaba-marinta ee wax soosaarka ballaaran ee leh qalabka casriga ah. Badeecadu waxay leedahay dulqaad aad u yar iyo waxqabad qaali ah.
1mm Acrylic Sheet extruded Acrylic sheets waxaa soo saaray habka soosaarka joogtada ah. Jiilaalka loo yaqaan 'Acrylic or PMMA' waxaa laga quudiyaa shaashadda xakamaynta illaa loo yaqaan 'hopper feed' oo ka sarreeya khadadka wax lagu shubo.
Acrylic sidoo kale loo yaqaan PMMA waxaa laga sameeyaa methacrylate methyl ester monomer. Iyada oo lagu garto hufnaanta wanaagsan, xasiloonida kiimikada, awooda cimilada, fududaanta in la wasakheeyo, si fudud loo farsameeyo iyo muuqaal qurux badan, Waxaa si weyn loogu isticmaalay dhismaha, alaabta guryaha iyo warshadaha xayeysiinta.